Fiombonam-bavaky ny mpiasan’ny fadintseranana. | Douanes Madagascar
Notanterahana tao amin’ny efitrano malalaky ny toeram-piofanan’ny fadintseranana tamin’ny 06 febroary 2019 ny fotoam-bavaka niraisan’ny mpiasan’ny fadintseranana. Ho fisaorana an’Andriamanitra noho ny nanomezany iny taona lasa iny sy ho fiatrehana ny taona 2019.
Ny fotokevitra nentina tamin’ity fotoana ity dia ny voasoratra araky ny Eksodosy 23.20 « Indro izaho maniraka ny Anjely eo alohanao hiaro anao eny an-dalana ».
Nanomboka tamin’ny 10 ora ny fotoana izay natrehin’ireo mpiasan’ny fadintseranana sy ireo mpitantana isan’ambaratongany. Ny pastora ANDRIANARIJAONA Ndrianja no nitarika ny fotoana. Nifanesy ireo hira sy vavaka ary ny vakiteny ka nofantenina tao amin’ny bokin’ny Eksodosy :23.20-30, Matio :7.21-27, Hebreo :13.5-7. Ny Tarika Ndriana RAMAMONJY no nanentana amin’ny fanafanàna ny fotoana amin’ny alalan’ireo hira fiderana.
Nofaranana tamin’ny fialana heteheta ny fotoana.